Isan-taona dia manonta boky kely misy ny alimanaka malagasy ny mpanandro maro na ny mpamokatra mpiara-miasa amin'izy ireo. Nanomboka ny volana Aprily 2019 dia efa misy ihany koa, ho an'ireo mpampiasa ny finday Android, ny haitao natokana hijerena ny alimanaka sy tetiandro malagasy  araka ny fomba fanisàna atao hoe "isa lava". (tohiny...)
Ny fanandroana malagasy dia endriky ny fanandroana ataon'ny mpanandro malagasy izay andinihany sy ampiharany ny fifandraisan'ny fotoana ahaterahan'ny olona iray na ny fotoana ahatanterahan'ny zavatra iray andaniny, amin'ny toerana sy ny toetran'ireo zavatra eny amin'ny lanitra, indrindra ny Volana, ankilany, araka ny tetiandro nentin-drazana malagasy sy ny fifandraisan'izany amin'ny ho toetr'ilay olona teraka na ilay zavatra miseho na tiana hotanteraka. Izany fifandraisana izany no atao hoe vintana. Ambaran'ny mpanandro malagasy fa mamaritra ny toetra sy ny hoavin'ny olona ateraka na ny zavatra tanterahina tandrify azy ny vintana nefa azo ovana izany amin'ny alalan'ny fanalana vintana na fanalana faditra raha ratsy ka atahorana hitera-doza io vintan-dratsy io. Tsy ny vintana mifandray amin'ny Volana sy ny kintana ihany anefa no voakasiky ny fanandroana malagasy fa ny vanim-potoana rehetra hatramin'ny andro ao amin'ny herinandro sy ny fizaràn'ny andro, ka hatramin'ny fizaran-taona sy ny taona koa. Manampy izany ny lafintany (atsimo, avaratra, atsinanana sns) sy ny zavatra hafa toy ny tany, ny rivotra, ny afo ary ny rano sns. Tsy ny volana sy ny andro ihany no manan-danja eo amin'ny fanandroana malagasy fa ny fizarazaran'ny andro koa, toy ny maraina sy ny tolakandro, ny andro sy ny alina, ny miposaka masoandro sy ny mitatao vovonana sy ny milentika masoandro sns. Noho izany dia tsy ny fotoana ihany no sahanin'ny fanandroana malagasy fa ny erana na ny habaka koa.
Fanao andavanandro teto Madagasikara ny fankanesana any amin'ny mpanandro teo amin'ireo andriana tamin'ny taonjato faha-18 sy faha-19. Tao Imerina teo antenantenan'ny taonjato faha-19 dia nahay nanandro ny iray ampahatelon'ny olona.
Araka ny finoan-drazana malagasy dia lova avy amin'ny ray aman-dreny na talenta avy amin'ny Zanahary ny fanandroana. Ilain'ny Nataolo malagasy ny manontany mpanandro alohan'ny hiterahana, hanamboarana trano na fasana, hanaovana hasoavana na fanambadiana, hisantatra na hitokana zavatra, handevina sns. (tohiny...)
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Takelaka/*/tsara_vakiana&oldid=1000415"
Voaova farany tamin'ny 15 Janoary 2021 amin'ny 18:07 ity pejy ity.